Australia Sayenzi uye Tekinoroji Zvigadzirwa | Absolut Kufamba
Luis Martinez | 20/04/2021 09:32 | Yakagadziridzwa ku 20/04/2021 10:34 | Ositireriya
Iko hakuna akawanda seasustralia uye tekinoroji zvigadzirwa seizvo zvakawanikwa mune dzimwe nyika dzepasi. Icho chikonzero chiri nyore: Ositireriya inyika vadiki Uye haina kunge isina nguva yekumira zvakanyanya munzvimbo idzi.
Zvisinei, nyika yegungwa yakatotipa mugove wayo wakanaka wekuwana. Uye, pamusoro pezvose, zve Kukosha kukuru kwesainzi uye inozivikanwa kwazvo maererano nehunyanzvi. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve Australia yesainzi uye tekinoroji zvigadzirwa, tinokukoka iwe kuti uenderere mberi nekuverenga.
1 Iwo makuru eAustralia esainzi uye tekinoroji zvigadzirwa
1.1 Australia Sayenzi Zviwanikwa
1.1.1 Kushandiswa kwepenicillin
1.1.3 Mushonga wepilloma wemunhu
1.1.4 Iyo cochlear inodyara
1.1.5 Iyo ultrasound scanner
1.1.6 Kuchengetedzwa kwenharaunda kuburikidza nemakorari matombo
1.2 Australia zvigadzirwa zvehunyanzvi
1.2.2 Bhokisi dema renendege
1.2.4 Iyo yemagetsi chibooreso
Iwo makuru eAustralia esainzi uye tekinoroji zvigadzirwa
Sezvatakakuudza, panotova nenhamba zhinji dzekuwana dzakaitwa nevaAustralia. Nechikonzero ichi, uye kuita kuti kujekesa kwedu kujekeseke, tichatanga tataura nezvezvimwe zvakakosha pasainzi uyezve mamwe akanyanya kuzivikanwa netekinoroji.
Australia Sayenzi Zviwanikwa
Nezve izvi, zvigadzirwa zveAustralia zvakabatsira iyo Hutano hwevanhu (sezvatichaona nekukasira, ivo vane chekuita nepenicillin) uye na nzvimbo. Zvimwe zvezviwanikwa izvi ndizvo zvatiri kuzokutsanangurira.
Wese munhu anoziva kuti penicillin yaive kuwanikwa kweBritish Alexander Fleming muna 1928. Zvisinei, zvisinganyanyi kuzivikanwa ndezvekuti vaive maAustralia Howard W. Florey uye chiGerman Ernst B. Chain uyo akagadzira nzira yekugadzirwa kwayo kwakawanda, chimwe chinhu chingazoponesa mamirioni ehupenyu hwevanhu. Muchokwadi, Fleming paakagamuchira iyo Nobel Prize muna 1945, akazviita pamwechete nevaaishanda navo vaviri.
Dombo mukuremekedza Ernst B. Chain
Ichi chiridzwa chekurapa chinotendera varwere vemoyo kuti varambe vachirova zvavo. Inotumira zvidiki zvemagetsi kunhengo kuti ibatsire kuzviita. Yakagadzirwa nefizikiki Edgar dumba uye chiremba Marc Lidwill, zvese zviri zveAustralia, kutanga kwema1920. Zvisinei, kushandiswa kwaro hakuna kuzoitika kusvika kumaXNUMX.
Mushonga wepilloma wemunhu
Kunyangwe dzimwe nyanzvi dzakabatanidzwawo, mushonga uyu uripowo pakati pezvigadzirwa nesainzi nehunyanzvi zveAustralia pane zvayakanakira Paive nevadzidzi vaviri kubva kuYunivhesiti yeQueensland, Ian Fraser y Jian Zhou, uyo akakwanisa kugadzira chidimbu chakafanana nehutachiona uhu hwakasimbisa immune system kurirwisa.
Iyo cochlear inodyara
Ichi chishandiso chakabatsira mazana ezviuru ematsi kuti vavandudze matsi dzavo. Iyo yakaiswa mumusoro uye inokwanisa kumutsidzira wekunzwa mutsinga. Zvanga zviri Graeme clark, purofesa paYunivhesiti yeMelbourne, uyo akaigadzira. Baba vake vakatambura nekunzwa kwekunzwa, uye pavakaedza kumubatsira, vakawana ichi chishandiso chinobatsira kwazvo.
Iyo ultrasound scanner
Ichi chigadzirwa chekurapa icho chashandiswa nhasi kugadzira ultrasound Yakagadzirwa neAustralia Commonwealth Acoustics Laboratory, iyo yakazotumidzwa zita chairo kuti Ultrasound Institute. Vagadziri vayo vakawana nzira yekutora maekisheni eurtrasonic ayo anodonhedza matukisi emuviri wedu nekuashandura kuva mifananidzo. Kushambadzira kwayo kwakatanga mu1976.
Kuchengetedzwa kwenharaunda kuburikidza nemakorari matombo
Sezvaunoziva, iyo Great Barrier Reef Inowanikwa kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweAustralia. Kune anopfuura makiromita zviuru zviviri nemazana mashanu echimiro chakakura pasi pemvura chiri panjodzi parizvino. Zvichida ndosaka maAustralia agara ari pamberi pamberi Oceanography.
El Australian Institute yeMarine Sayenzi inogadzira mapurojekiti akasiyana siyana ekuchengetedza nharaunda. Pakati pezvakakurumbira pane iyo yakatsaurirwa kuna inodzora kurima kwekorari. Chinangwa chayo ndechekudzosera matombo kumamiriro avo echisikigo. Nekudaro, izvi zvipenyu zvinobatsira ku zvakaringana nharaunda yemakungwa uye nekuachengetedza kubva pamhedzisiro iyo shanduko yemamiriro ekunze pavari.
Australia zvigadzirwa zvehunyanzvi
Chinhu chakakurumbira muAustralia tekinoroji hapana mubvunzo kuti iyo wifi, yatichataura nezvayo inotevera. Asi kune vamwe vakashandawo kunatsiridza kuchengetedzeka kwemhepo kana zvimwe zvinangwa zvakasiyana. Ngationei.
Iyo isina waya yekubatanidza kune yeInternet yauya kuzobatsira kushandiswa kweizvi mudzimba nemahofisi. Ichi chishandiso chakakosha chakakonzerwa nesainzi weAustralia John O'Sullivan nechikwata chake chevashandi vaSidney. Ivo vese vaive veCSIRO, mutumbi we Commonwealth yakatsaurirwa kusimudzira kutsvagisa kwesainzi uye tekinoroji.
Bhokisi dema renendege
Sezvaunoziva, chishandiso ichi chinoshandiswa nendege kutenderera pasirese nhasi chinoshandiswa kutsvaga zvinoitika mundege munguva dzisati dzaitika tsaona. Dzese nhaurirano dzemutyairi uye paramende dzendege dzakanyorwa mairi, izvo zvakare zvisingapere. Muvambi wayo aive weAustralia David warren, uyo akanyatsorasikirwa nababa vake mutsaona yendege.
Hausi iwo wega mupiro wenyika yegungwa kune yekuchengetedza ndege. Muna 1965, Jack Grant, mushandi wequantas yendege, akagadzira iyo slide yemamiriro ekukurumidzira. Iyo inoshandiswa kudzikisa vafambi mushure mekumhara zvisina kunaka.
Kunyangwe isina kudaidzwa izvo panguva iyoyo, chishandiso chinonyanya kubatsira ichi chakagadzirwa zvishoma neveAustralia Stephen Ma y Neil Gordon padivi paDanes Lars naJens Rasmussen mukutanga XNUMXs. Yakanga iri gare gare, apo zvigadzirwa zvakatengwa neGoogle, kuti yakagamuchira zita rayo razvino.
Nhema bhokisi rendege
Iyo yemagetsi chibooreso
Kana iwe uchifarira ma DIYers, iwe unozoziva kuti yakawanda sei chishandiso ichi chinoita kuti basa rako rive nyore. Zvakanaka, zvakare kugadzirwa kweAustralia. Mune ino kesi, zviri nekuda kweinjiniya yemagetsi Arthur James, uyo akaita yekutanga kare kare sa1889. Ehe saizvozvo, yanga isiri inotakurika, asi yakakura zvikuru. Zvisinei, yaigona kuboora kunyange matombo.
Iyo firiji yechinyakare iyo nhasi inoita kunge yakakosha mudzimba medu ingangoita zana nemakumi mashanu emakore. Pazvaisavapo, chikafu chaichengetwa munzvimbo dzinotonhorera mudzimba. Sezvineiwo, vaive mamaneja edoroja reAustralia rakashanda James harrison kugadzirisa matambudziko ekuchengetedza chinwiwa chake muna 1856.
Mukupedzisa, takuratidza imwe ye Australia yesainzi uye tekinoroji zvigadzirwa. Sezvauri kuona, mupiro wenyika yegungwa mukusimudzira kwevanhu kwave kungopfuura kunakidza uye, pamusoro pezvose, kwakakosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Australia yesainzi uye tekinoroji zvigadzirwa
ana mercedes villalba G. akadaro
Zvakanaka chaizvo zvavanotaura kana kutsanangura
Pindura kuna ana mercedes villalba G.